Coronavirus na-enweta ugwu Mount Everest, mana naanị n'akụkụ ndị China
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Coronavirus na-enweta ugwu Mount Everest, mana naanị n'akụkụ ndị China
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Nepal • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ Coronavirus na-agba ọsọ njem na mpaghara ugwu China nke ugwu Everest ka amara ọkwa taa na China akagbuola ikike niile maka oge opupu ihe ubi n'ihi coronavirus, dị ka otu akụkọ si na mpụga Online.
N'ezie, imirikiti njem Everest na-aga n'akụkụ ndịda nke ugwu ahụ kwa afọ, nke bụ mpaghara Nepalese "Nepal nwere ike ịgbaso ndu China ma mechie oge ha," onye ọrụ njem Alpenglow kwuru. “Ọbụna ma ọ bụrụ na ha emeghị, egwu nke ntiwapụ nke COVID-19 na nsogbu ndị na-esite na mpaghara ndịda, gụnyere enweghị njikwa dị irè, ịba ụba, na ice ice na-enweghị atụ, mere njem dị otú ahụ adịghị mma n'anya anyị. ”
N’ọnwa gara aga, praịm minista Nepal kwuru, “Nepal enweghị coronavirus.”
Nkwupụta nke gọọmentị Nepal kwuru, sị: Gọọmentị Nepal na-akọ otu ikpe coronavirus. Onye natara ọgwụgwọ, agbakeela, achọgharịrị ya ma ọ nweghị coronavirus ugbu a. Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Kathmandu na-enyocha onye njem ọ bụla maka ahụ ọkụ ma ọ bụrụ na achọta nke ọ bụla, a na-akpọga ha ozugbo n'ụlọ ọgwụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị onye nwere Coronavirus covid-19. Achụọla ọtụtụ ụgbọ elu na China wee mechie oke ala niile na China. India nwere nsogbu dị ala nke Corona Virus Covid-19 na ndị ọrụ ala India / Nepal na-enyocha ọnọdụ okpomọkụ onye ọ bụla na ntinye.
N’izu gara aga, Nepal tinyere mmadụ iri asaa na atọ na iche iche mgbe ha laghachitere obodo ahụ mgbe emechara ememme Afọ Ọhụrụ ndị China na Chengdu na Beijing. Ndị ọrụ Nepalese gbakwụnyere usoro visa maka ndị njem si mba asatọ na-enwe ọkwa kachasị elu nke coronavirus. Usoro ihe a na-emekarị maka ọtụtụ ndị ọbịa bụ inweta visa na ọdụ ụgbọ elu ozugbo ha ruru. Ugbu a ndị ọbịa si China, Iran, Italy, South Korea, na Japan ga-enwerịrị visa ha na mba ha tupu ha erute Nepal. Mmachibido yiri nke a ga-abanye n'ọrụ maka ndị njem si France, Germany, na Spain na-amalite na Machị 71.
Ka ọ dịgodị, na Oge Himalayan akụkọ na ndị dọkịta na-agba ice na-aga Base Camp iji bido idozi ụzọ gafere Khumbu Icefall. Ndị nduzi Sherpa na-arụ ọrụ na Washington Mountain International Guides na-aga n'ihu dị ka ọ dị na mbụ ma na-ezube iwu iwu ịma ụlọikwuu ha na Base Camp na March 21.
Ọ bụrụ na Nepal agaghị emechi akụkụ nke Everest afọ a, ndị na-arị elu ga-adị ole na ole karịa na 2019, mgbe mmadụ 1,136 nọ na ugwu ahụ. A gaghị ahụ ọtụtụ ndị njem si Korea na China ma ọ bụ Europe na 2020, mana ọ ka ga-ejupụta, na ikekwe ndị mba ọzọ 300 gbakwunyere otu ndị nkwado nkwado ahụ na elu kachasị elu ụwa.
Ozi ndị ọzọ dị site na Allọ Ọrụ Njem Nleta Nepal